Uluhlu lweparameter yobugcisa kumatshini wokutyabeka ojikelezayo
Ubungakanani begumbi lokudibanisa
501050 × 1250, 304 yenziwe ngentsimbi eshayinayo.
×900 × 1050
Ubungakanani obuphakathi kwendawo yokutyabeka
Isibiyeli esiku-1680mm ngaphezulu komhlaba, ilungele ukuphakama kokusebenza kwe-ergonomic.
Isibiyeli esibonisa i-1468mm ngaphezulu komhlaba, ilungele ukuphakama kokusebenza kwe-ergonomic.
Isibiyeli esibonisa i-1510mm ngaphezulu komhlaba, ilungele ukuphakama kokusebenza kwe-ergonomic.
1.Idiski yokusebenza ye-single-arched, ukuhlangabezana abathengi’ Ukujikwa kwe-5-30r / min, utshintsho olungenantambo.
2.I-arched-workpiece disc eyi-3, inguquko kwiplanethi kunye nokujikeleza, Ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kumthamo wemveliso ukuya kuthi ga kubungakanani obukhulu.Rotation 5-30r / min, utshintsho olungenantambo.
Iyafumaneka iziqwenga ezine, engile isibiyeli kuyinto adjustable, Ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ngokufana ukuya kuthi ga kubungakanani obukhulu.Rotation 5-30r / min, utshintsho olungenantambo.
Idiski yokusebenza ye-single-arched, ukuhlangabezana abathengi’ Ukujikwa kwe-5-30r / min, utshintsho olungenantambo.
Icandelo: Impompo yokusasaza iDIP-12000 (Leybold), Impompo yengcambu ZJY-300, Impompo yoomatshini 2X-70, Impompo yesondlo 2X-8 304 yenziwe ngentsimbi eshayinayo.
Icandelo: Impompo yokusasazeka KT-400 (IZhenhua), Impompo yengcambu ZJY-150, Impompo yoomatshini 2X-70, Impompo yesondlo 2X-8.
Icandelo: Impompo yokusasaza KT-600 (IZhenhua), Impompo yeengcambu ZJY-600, Impompo yoomatshini 2X-70, Impompo yesondlo 2X-8.
Icandelo: Impompo yokusasazeka KT-800 (IZhenhua), Impompo yeengcambu ZJY-600, Impompo yoomatshini 2X-70, Impompo yesondlo 2X-8.
Umshini wokugqibela: bhetele kune-4 × 10-4 Pa.
Ifakwe isixhobo anti-turbulence, uyilo olungena ngaphakathi kukhuseleko, ngesandla kwaye oluzenzekelayo ozikhethelayo.
Indlela yokufudumeza kumbhobho wokufudumeza, Ulawulo lwePID, ubuninzi bama-350 ℃ ± 1.5 ℃.
Ukunyuka kwamaxabiso egesi
Isixhobo sokulawula ukuhamba kwegesi okanye ulungelelwaniso oluchanekileyo lwevalveji yokunyuka kwamaxabiso.
I-DC 3KV, 06KW intonga yendlela (Isetyenziselwa ukucoca indawo yokusebenza ngaphambi kokutyabeka).
Umthombo womphunga (ukhetho)
1. I-TELEMARK-270 ° umpu we-elektroniki (ngaphandle), 6KW, ombane aphezulu 4KV-10KV uhlengahlengiso, Ukuskena kwembumba engunxantathu, isetyhula scan, Indawo elungileyo yeglasi egxile, ukuchaneka kokubeka phezulu, kunye nokuvavanywa kokuphinda kwenzeke kwakhona.
2. I-electron gun yasekhaya (IZhenhua): 6KW, ombane aphezulu 4KV, 8KV uhlengahlengiso, Ungakhetha wave unxantathu, sine wave, isikwere sokutshekisha ngokukhululekileyo.
3. Crucible: Isakhelo esithandathu Φ38 × 20 ngokuyinyibilikisa okanye isakheko sesine 87 (isetyenziselwa ukusetyenziswa kakhulu kwezinto zokunyibilika komphunga eziphantsi) okanye kwisisu-ezine Φ48 × 18 ngokuyinyibilikisa.
Umthombo we-Ion (ukhetho)
1. I-RF (Rhoqo kwiRadiyo) Umthombo we-Ion (Ithunyelwe).
2. 5Imvelaphi ye-KVA Hall ion (iveliswe nguZhenhua), esetyenziselwa ukucoca ngaphambi kokufakwa kombane okanye ukutyabeka okuncedisayo kwinkqubo yokwenza i-electroplating, eliluncedo ekuphuculeni isalathiso sefilimu, ukuqina, Ubuninzi kunye nokunamathela kwifilimu.
Inkqubo yolawulo ubukhulu film (ukhetho)
1. Umlawuli wecrystal we-MDC-360 (ngaphandle) Ungagcina 1, 99 maleko yenkqubo ukutyabeka oluzenzekelayo, 99 iintlobo zedatha yenkqubo, ukuchaneka 0.5%+1? Impazamo ehleliweyo. 2TELEMARK-880 isilawuli sekristal (ukungenisa): Ungagcina 1, 99 maleko yenkqubo ukutyabeka oluzenzekelayo, 99 Iindidi zedatha yenkqubo. 精度 0.5% + 1? Imposiso elungisiweyo.
3. TELEMARK-820 isilawuli se-optical (ukungenisa): yamkela ububanzi obuninzi be-spectrum epheleleyo-yohlalutyo lwetekhnoloji yetekhnoloji, kwaye ugweba ukuphela kwefilimu ngokuhlalutya ukuhanjiswa (okanye ukubonakalisa) Ijika lekhasi lokujonga 370-870 Ukuchaneka kolawulo oluphezulu, ulawulo lwamaza olunye, ulawulo oluzenzekelayo kunye nolawulo oluchanekileyo lunokusetyenziswa, inqanaba eliphezulu lokudityaniswa.
4. I-TELEMARK-820 isilawuli se-optical kunye ne-TELEMARK-880 isilawuli se-crystal sinokuhlangabezana neemfuno zokuchaneka okuphezulu kunye nokuphindaphinda ukuphindaphinda okuphezulu..
5. Umlawuli ombane wasekhaya (njenge 9704 i-monochromator ehambelanayo, njl.), lobude ilungelelaniswe ukusuka 330 ukuya 870, kunye nokuchaneka kunokufikelela kwi-± 1.5nm.
Ngesiseko semagneti, inokubekwa nakwesiphi na isikhundla segumbi lokungena kunye nokulawulwa kwekhabhinethi.
Ngaphambili: Uhlalutyo lwengxaki yetyhefu kunye nokumnyama kwesiqingatha sethagethi emva kokutshiza
Okulandelayo: Uluhlula njani ubuchwephesha bemagnethi sputtering？